Ukoluka: izibonelelo ezinokubakho, ukuchacha kunye nemingcipheko
Ukoluka ngumsebenzi wokususa ijwabi lomntu. Yenye yezona nkqubo zindala kunye neqhelekileyo zotyando. Indoda ingayifumana le nkqubo ngenxa yezizathu zonqulo, ezentlalo, ezonyango, okanye ezenkcubeko. AmaZiko okuLawula nokuKhuselwa kwezifo (CDC) akhuthaza ulwaluko lwamadoda ngezizathu zokuba kubonaka...
Imifanekiso engamanyala kunye noxinzelelo: Ngaba lukhona unxibelelwano?
Iinkolelo ezithile zenkcubeko, iinkolelo zokomoya, okanye iintsomi ziyayixhasa umbono wokuba kukho unxibelelwano olunokubangela iphonografi kunye nemicimbi yezempilo yengqondo enje ngoxinzelelo. Nangona kunjalo, okwangoku, abukho ubungqina oboneleyo bokuxhasa oku. Ngokutsho kwe-American Association ...
Uxinzelelo lwe-covid luhlala njenge-pfizer kwaye urhulumente wethu uhambisa imiyalezo eyahlukeneyo
Amaziko ase-U. S. OLawulo noThintelo lweZifo akhuphe izikhokelo ezitsha ngolwe-Sihlanu ngomyalezo ocacileyo: Abantwana kufuneka babuyele esikolweni buqu kwesi sikolo, kwaye izikolo kufuneka zilumke kakhulu ngaphambi kokususa amanyathelo ajolise kubo. Kodwa izigqibo ezimalunga nokhuselo lweCovid-19 e...
Umchamo oqaqambileyo otyheli: imibala, utshintsho kunye nezizathu
Umchamo oqhelekileyo kufuneka ube mthubi tyheli. Kufanele ukuba icace kwaye ingenamafu okanye amasuntswana, kwaye ngamanye amaxesha umchamo unokujika umbala oqaqambileyo otyheli. Umchamo ungathatha uluhlu olubanzi lwemibala, kwaye nganye inentsingiselo eyahlukileyo kwimeko leyo. Rhoqo, ukuphelelwa n...
Ukuvalelwa kuka-Jacob Zuma luloyiso kumgaqo-siseko wase Mzantsi Afrika emva kocalucalulo
Ngobusuku bangoLwesithathu, ngo-12: 45 ukuya ezinzulwini zobusuku, uJacob Zuma waqhwanyaza. Kweliphi elona xesha libalulekileyo lolawulo lomthetho eMzantsi Afrika emva kocalucalulo, owayesakuba ngumongameli wanikezela emapoliseni; UZuma, eneneni, wayeneentsuku ezintathu emva kwexesha. INkundla ePhak...